Archive du 20170316
Centre d�Immatriculation Ambohidahy Ravan�ny Bianco ny tambajotra mpanao kolikoly
Taratasy hosoka, kolikoly amin�ny fandraisana fangatahana hanovana �permis � sy � carte grise � ho bi�metrika.
Depiote Nicolas Randrianasolo Lojika ny fanohanako ny filoham-pirenena
Lojika ny fanohanako ny filohan�ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina, hoy ny Depiote Randrianasolo Jean Nicolas avy any Betroka, raha namaly an�ireo fanakianana azy nivoaka an-gazety tao ho ao.
Harinaivo Rasamoelina � Hatsangano ny governemanta iraisana ! �
Ny zava-misy amin�izao fotoana izao, ny tetika manontolo ataon�ny fitondrana na ny ivelan�ny fitondrana dia diso daholo, hoy ny antoko DHD Madagascar,
Miarahaba e ! Misimisy ihany ry Jean izay taratasy nosoratana teto izay fa ny omaly tsy niova ihany ny eto amin�ny tan�na a ! Fa dia tena tsy hainareo mihitsy ve ny manova ilay revy eto ?
Fanagadrana an�i Hiary Rapanoelina Milaza ny heviny ny filohan'ny SMM
Miteraka adihevitra goavana ny raharaha Hiary Rapanoelina amin�izao fotoana izao, indrindra fa taorian�ny nilazan�ny Masoivoho
Resaka ady tany Nofantsihan'ny fokonolona ny biraon�ny fokontany
Raha ny fanazavana azo, olona mpivahiny nangataka tany tamin�ireo olobe teo an-tan�na no niandohan�ny tantara. Taty aoriana, rehefa maty io olona io, dia nilaza ny taranany (R.J.B ) fa izy no tompon�ny tany, satria efa novidian-drainy roa alina ariary monja ny tan�na iray manontolo, ny taona 1978.
Filohan�ny CAF Hotanterahina anio ny fifidianana
Hotanterahina anio alakamisy 16 martsa any Addis Abeba Ethiopie ny fifidianana izay ho filohan'ny Kaonfederasionina Afrikanina momba ny baolina kitra (CAF),
KIANJA MITAFON�I MAHAMASINA Ho ambohipihaonan�ny mpiantsena sy ny mpivarotra
Ho ambohipihaonan�ny mpiantsena sy ny mpivarotra indray manomboka ny 29 martsa ho avy izao etsy amin�ny kianja mitafon�i Mahamasina.
Tandindon�ny ho avy !
Toran-kovitra ny fitondrana ankehitriny vao mahita ny fitsapan-kevitra maro samihafa miompana amin�ny fifidianana ho avy. Mitana ny rambony hatrany mantsy ny filoha am-perinasa manoloana ireo mety ho kandida hafa.
ELIDIO RANDRIANJAFY, FILOHAN�NY ANEFFA Nalana tsy ho talen�ny EPP etsy Anosizato Andrefana
Nalana tsy ho talen�ny sekoly ambaratonga fototra etsy Anosizato Andrefana intsony Andriamatoa Randrianjafy Elidio, filohan�ny ANEFFA. Efa ho folo andro izay no nanalana azy tamin�io toerana io raha ny loharanom-baovao azo.
FIKAMBANANA MIARO NY ZON�NY MPANJIFA MALAGASY Mangataka ny hanafoanana ny MID
Mangataka ny hanafoanan�ny fanjakana ny �March� inter-bancaire de devise� na ny MID eto amintsika ny FIZOMPAM (Fikambanana miaro ny zon�ny mpanjifa Malagasy).